अन्याय र अपमानको विष पिएरै भएपनि समृद्ध राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा आफूहरुलाई समर्पित गराैं – Nepali Profile
अन्याय र अपमानको विष पिएरै भएपनि समृद्ध राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा आफूहरुलाई समर्पित गराैं
बिशाल अर्याल १६ असार २०७७, 5:38 am
वि.सं १९९४ सालमा जन्मनु भएको मेरो हजुरबुवाले जहानियाँ राणा शासनका विरुद्ध आफ्नो युवा अवस्था खर्चनु भयो । वि.सं २०२८ सालमा जन्मिनु भएको मेरो बुवाको अधिकांश उर्जाशील समय पन्चायत र राजतन्त्रका विरुद्ध खर्च गर्नुभयो । वि.सं २०५९ सालमा जन्मिएको म, मेरो युवा अवस्थासम्म आइपुग्दा मसँग मेरो हजुरबुवाले चाहेको प्रजातन्त्र र मेरो बुबाले चाहेको गणतन्त्र पनि छ ।
अझ, भनौं भने थप मसँग जनताका प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधान र जनादेश प्राप्त स्थिर सरकार पनि छ । तर यी सबैको आडमा नयाँ नेपाल बन्छ भनि हिजो मेरो हजुरबुवा ठगिनु भयो, आज मेरो बुवा ठगिनु भयो र भोलि फेरि म ठगिने कि नठगिने यो प्रश्नको उत्तर सरकारसँग होइन, मसंग छ ।अर्थात मेरो पुस्तासंग छ ।
हिजो बाहरुसँग विकल्पहरु थिएनन्, हामीसँग त आज पाइलै पिच्छे विकल्पहरु छन् । कहिलेसम्म हामी नेताहरुलाई मात्रै गाली गर्ने ? एकपटक आफ्नै छातीमा हात राखेर के हामी भन्न सक्छौं त यो देशको एक असल नागरिक हो म भनेर । विमति, निराशा र असन्तुष्टिहरु हामी सबैसँग छन् तर आउनुहोस् युवा साथीहरु एक पटक अन्याय र अपमानको विष पिएरै भएपनि समृद्ध राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा आफूहरुलाई समर्पित गराैं ।
एउटा यस्तो लडाइँ लडौ जुन नेपाली इतिहासमा सरकार विरुद्धको अन्तिम लडाइँ बनोस् । तर यो लडाइँ व्यवस्था विरुद्ध होइन हिजो हामीले राणा, राजा हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा भोगेको शासक वर्गको नियति र प्रवृत्ति विरूद्ध हुनेछ । अरु संघर्षहरुभन्दा यो हर तरिकाले भिन्न हुनेछ । हामी सडकबाट होइन सरकारको सहयात्री बनेर सरकारभित्रैबाट संघर्ष गर्ने छौं । हामी कानुनले दिएको घेराभित्र रहेर सरकारलाई पर्दा सल्लाह र गाली दुबै दिनेछौं । सरकारसंग जवाफदेहिता पल पलमा खोज्नेछौं ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारी बनेर अब कार्यालय छिर्ने एउटा युवक आफूसँगै सिङ्गो कार्यालयलाई ईमान्दार बनाउने कसम खानेछ । एउटा प्रहरी जवान नागरिकको भरपर्दो साथी बन्ने वाचा गर्नेछ । डाक्टरहरु कलियुगमा जीवित देवता बन्ने सङ्कलप गर्नेछन् । शिक्षकहरु ज्योति बनेर उज्यालो छर्नेछन् । कला–साहित्यका अनुरागीका कलमहरु निष्पक्ष हुनेछन् अनि न्यायका लागि अड्डा र अदालतमा जनताले झोली थाप्नु पर्नेछैन ।
हामी हिजोका दिनमा स्विजरल्याण्ड र सिंगापुर बनाउछौं भन्दै चोक–चोकमा भाषण गर्दै हिड्ने हाम्रा नेताहरुलाई मौलिक नयाँ नेपालको मोडालिटी हस्तान्तरण गर्नेछौं । त्यसैले युवा साथीहरु आउनुहोस् हातमा हात मिलाउँ,
‘जन्मेको काखको आज कर्जा चुकाउने बेला भयो
अझै पनि निदायौ भने भूमिले भन्छ, ढिला भयो ।’
समयको लामो कालखण्ड हामीले सरकारको परीक्षा लियाैं । एकपटक हामी आफैले परीक्षा दिएर हेर्ने कि ? बरिष्ठ साहित्यकार सरुभक्तले आफ्नो पुस्तक पागल बस्तीमा भनेका छन् ‘हामीसंग सुन्दर प्रकृति छ तर सौन्दर्य चिन्तन छैन ।’ देश–विदेशमा रगत बगाएर तमाम युवाहरुले बटुलेका त्यी अनेकन चिन्तनहरुलाई एकपटक यो उर्वर भूमिमा खनाएर हेराैं त !
यसको उत्पादन अपेक्षा गरिएभन्दा कयौ गुणा बढी आउने छ । दोषी चस्मालाई फुकालेर हेरौ त ! प्रतिकूलताहरु भित्र पनि अनेकन सम्भावनाहरु देखिने छन् । हिजो हजुरबुवा र बुवाले संघर्ष गर्नु भयो, आज अन्तिम संघर्ष गर्न म पनि तयार छु । म कल्पना गरिरहेछु जीवनको कुनै क्षण यस्तै विचारहरु कसको मनमा पो नआएको होला र ? तर त्यी कल्पनाहरूले किन कुनै आकार पाएनन् ? यसपटक आकार दिएर हेरौं त । तपाइँले अरुको रक्षार्थ हतियार बोकिरहेको त्यी इराक र अफगानिस्तानमा तपाइँका छोराछोरी बुद्धको सन्देश बोकेर गएको । नारीलाई बन्दकी राखेका त्यी देशहरुमा सीता र गार्गीको सन्देश बोकेर गएको । नासामा हाम्रा ग्रन्थहरु अंग्रेजीमा उल्था गरिरहेको । बिजुलीपानी बेचिरहेको । हाम्रा पाखापखेराहरुमा बहुदेशीय कम्पनीहरु स्थापना भएको । त्यसैले कहीँ कतै हामी अबेर पो गरिरहेका छौं कि ?